March | 2010 | Cricket and Football in Nepalese blood
मैदानमा लाखौंको बाजी
Posted in Football on March 31, 2010| LeaveaComment »
अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) भित्र करीब ३ वर्षसम्म एकअर्कालाई निषेध गर्ने प्रतिस्पर्धा नचलेको भए राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा अहिले देखिएको खेल माहोल २०६४ सालमै तयार हुनेथियो। जारी शहीद स्मारक सानमिगल ए डिभिजन लिग फुटबल मा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ साबित गर्न राम्रै धनराशी खर्चेरै भएपनि १२ वटा क्लब मैदान उत्रिएका छन्।
यस वर्ष एन्फाले लिगका लागि तर्जुमा गरेको १ करोड ३२ लाखको बजेटमध्ये पुरस्कारका लागि रु.६८.५० लाख छुट्याएको छ। लिगमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुने क्लबले क्रमशः २० लाख, १० लाख, ५ लाख र नवौं हुनेले ५० हजार नगद पाउने छन्। यसअघि उपेन्द्रमान सिंह र हरि खड्काले जस्तै खेल अवधिमा सर्वोत्कृष्ट कौशल देखाउने एक खेलाडीले बीस लाखको कार पाउने छ भने अन्य उत्कृष्टमध्येका ६ जनालाई एक-एक मोटरसाइकल दिइने छ।
कारका लागि चाहिने रु.२० लाख सरकारबाट फुत्काइसकेको एन्फाको बजेटमा गोर्खा ब्रुअरीको २५ लाख, अन्य प्रायोजकहरूबाट १० लाख र क्लब-खेलाडी दर्ताबाट १.३५ लाख आउने मात्र निश्चित भएको छ। यस लिगमा टिकट बिक्रीबाट उठेको मध्ये २० प्रतिशत (करिब १५ लाख) रकम पनि एन्फाले नै राख्नेछ। अपुग रकमका लागि प्रायोजकहरूसँग छलफल भइरहेको एन्फा प्रवक्ता ललितकृष्ण श्रेष्ठले बताए। २०६३ को लिगमा एन्फाको बजेट करिब रु.७५ लाख जति मात्र थियो। टिकटबाट उठेको पैसा क्लबहरूले बाँडेका थिए। पूर्व राष्ट्रिय कप्तान हरि खड्काले लिगमा बढेको एन्फा, क्लब र प्रायोजकहरूको लगानीलाई फूटबलको राम्रो भविष्यको सङ्केत मानेका छन्।
एन्फा प्रतियोगिताको थप खर्च जुटाउने ध्याउन्नमा छ भने १२ क्लब पनि खेलाडीको तलब-खर्च र प्रायोजक जुटाउने गणितमा व्यस्त छन्। यस वर्ष लिगका लागि सबैभन्दा बढी बजेट जोहो गर्नेमा चाहिँ थ्रीस्टार, मनाङमर्स्याङ्दी र एनआरटी क्लब परेका छन्। ६५ लाखको वार्षिक बजेट बनाएको एनआरटीले त लिगकै लागि करिब ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। उसले अहिलेसम्म प्रायोजक भने भेटेको छैन। बेलायत बस्ने भूपेन्द्र गुरुङले नाइक ब्राण्डका खेल सामग्रीहरूको प्रायोजन गरिदिएको एनआरटीको मुख्य आय स्रोत त्रिपुरेश्वरस्थित भवनबाट उठ्ने भाडा हो। महासचिव विनय प्रधानका अनुसार दुई वर्षअघि सोही भवन धितो राखेर क्लबले हिमालयन ब्याङ्कबाट रु.१ करोडको भरड्राफ्ट लिएको छ। देशको सबैभन्दा धनी क्लबका रूपमा परिचित र २०६३ को लिग विजेता मनाङमर्स्याङ्दीले पनि यस वर्षको लिगलाई रु.४० लाख नै छुट्याएको छ। यसको मुख्य आयस्रोत मनाङ समाज हो। यस क्लबलाई मनाङ जिल्लाका गाविस र क्लबहरूले आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन्।
यस वर्षको १२औं बूढासुब्बा कप विजेता राजधानीको पुरानो क्लब आरसीटीको वार्षिक बजेट रु.५३ लाख छ जो लिगका लागि मरिमेटेर लागेको छ। पाटनको क्लब फ्रेन्ड्स क्लबको पनि वार्षिक बजेट रु.४० लाख रहेको छ। त्यसैगरी यस लिगका लागि काठमाडौं मल मुख्य प्रायोजक रहेको सङ्कटा र मच्छिन्द्र दुवैले ३०-३० लाख छुट्याएका छन्।
२०६३/६४ को लिगमा नवौं र दशौं स्थानमा रहेका जावलाखेल युथ र व्वाइज युनियनले पनि लिगका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। जावलाखेलले लिगकै लागि रु.२५ लाख छुट्याएको छ। हाल उक्त क्लबसँग दिपेन श्रेष्ठ, राजकुमार घिसिङ र योगेश श्रेष्ठ अनुबन्धित छन् भने व्वाइज युनियनले पनि लिगमा बाजी लगाउन करिब २० लाखको बजेट बनाएको छ। व्वाइज युनियनका अरुण वैद्यका अनुसार क्लबले टिमको प्रदर्शनमा सुधार ल्याउन धरान र दार्जीलिङबाट खेलाडी ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
नेपाली खेल क्षेत्रमा बलिया शक्ति मानिने विभागीय क्लबहरू नेपाल पुलिस, नेपाल आर्मी र सशस्त्र प्रहरी टिम पनि शहीद स्मारक लिगका लागि आफ्नै किसिमका तयारीमा छन्। यिनीहरूको बजेटबारे यकिन तथ्याङ्क नभए पनि खेलाडी र प्रशिक्षकहरूले राम्रै तलबसुविधा पाउने गरेका छन्। नेपाल पुलिस क्लबमा राष्ट्रिय टीमका जुमानु राई, भोला सिलवाल, सुमन सुवेदी र चेतन घिमिरेलगायतका स्टारहरू छन्।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र नेपाल आर्मी क्लबले लिगकै लागि भनेर बजेट नछुट्याए पनि टिमका सबै खेलाडी विभागमा स्थायी जागिरे छन्। यी क्लबहरूले नियमित फूटबल खेल्ने ३० खेलाडीलाई तलबमा औसत मासिक रु.१० हजार दिँदा पनि यिनीहरूको वार्षिक खर्च रु.१ करोडभन्दा कम हुँदैन। लिगका लागि विभिन्न स्रोतबाट खर्चको जोहो गरिरहेका १२ वटै क्लबले तयारीबापत एन्फाबाट रु.३ लाख र टिकटबाट उठ्ने रकमको हिस्सा पनि पाउने छन्।
लिगमा बढ्दै गएको लगानीबाट प्रत्यक्ष रूपमा खेलाडीहरू नै लाभान्वित भएको देखिन्छ। लिग नियमित नहुँदा चर्चित खेलाडीहरूको पलायनले पनि लिगको आवश्यकता दर्शाउँछ। लोकबन्धु गुरुङ, युगलकिशोर राई र बालगोपाल साहुखल लगायतका खेलाडी अध्ययनका सिलसिलामा विदेश पलायन भइसकेका छन्। ललितपुरको एकान्तकुनामा साझ्ेदारीमा मदिरा पसल खोलेका नेबिल-थ्रीस्टारका कप्तान प्रदीप महर्जन भन्छन्, “लिग नहुँदा खर्च धान्न अरू क्षेत्रमा हात हाल्नुपरेको हो।”
नेपाली राष्ट्रिय फूटबल टोलीका अधिकांश खेलाडी समेटेको थ्रीस्टारका अध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठ क्लबको कुल बजेट दुईतिहाई खेलाडीमा जाने गरेको बताउँछन्। राष्ट्रिय टोलीका प्रदीप महर्जन, विजय गुरुङ, अन्जन केसी, सन्तोष साहुखल नेपालका सबभन्दा बढी रु.२५ हजार तलब लिने खेलाडीमा पर्छन्। महर्जन लिगको निरन्तरतासँगै पुरस्कार राशी बढ्दै गयो भने एक दिन खेलाडीको तलब मासिक ५०-६० हजार पुग्नेमा आशावादी छन्।
लिग नियमित हुन्छ भन्ने विश्वासमा पछि परेको एनआरटीले २०६४ मा विभिन्न क्लबहरूबाट २२ जना जति खेलाडी क्लबमा भित्र्याएको थियो। तीमध्येका अनिल गुरुङ अहिले भारतीय लिगमा व्यस्त छन् भने सागर थापा, नविन न्यौपाने, उमेश उप्रेती, विराज महर्जन एनआरटीबाटै खेलिरहेका छन्। यीमध्ये थापाले मासिक रु.२४ हजार बुझ्िरहका छन्। एमएमसीका शिव श्रेष्ठ र प्रताप सैंजु पनि धेरै रकम लिने खेलाडीमा पर्छन्।
चालु लिगमा फ्रान्स, ब्राजिल, डेनमार्क, तान्जानिया, दक्षिण कोरिया, भारत र बङ्गलादेशका गरी १३ विदेशी खेलाडी विभिन्न क्लबबाट भिड्दै छन्। विश्वविद्यालयस्तरका चार कोरियन खेलाडी भित्र्याएको एमएमसीले ती प्रत्येकलाई मासिक ८०० अमेरिकी डलर दिइरहेको छ। आरसीटीले मासिक रु.५० हजार दिने शर्तमा दार्जीलिङबाट दुई खेलाडी ल्याएको छ भने सङ्कटा क्लबले बङ्कलादेशी अण्डर १९ टोलीका दुई खेलाडी लिएको छ, मासिक २ हजार डलरमा। त्यसैगरी मच्छिन्द्रले मासिक २ हजार डलरमा तीन महिनाका लागि ब्राजिलका डेनिललाई अनुबन्ध गरेको छ। थ्रीस्टारले लिगकै लागि तान्जानियाका कास्टोरी मुम्बारालाई खानेबस्ने सुविधाका अतिरिक्त मासिक ७०० डलरमा भित्र्याएको छ।
नेपालस्थित अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत विदेशीहरूलाई पनि क्लबहरूले लिगमा उतारेका छन्। नेपालमै रहेका फ्रान्सका जोसेलिन मोर्गन थ्री-स्टार र डेनमार्कका शायन मोसाभी एनआरटीबाट खेलिरहेका छन्।
निजी क्षेत्रको चासो
चालू लिगमा आफ्नो संस्था र उत्पादनहरूको ब्राण्डिङ गर्न अघोषित होडबाजी नै शुरु भएको छ, निजी ब्याङ्क, विजनेस हाउस र व्यापारिक संस्थाहरूबीच। प्रमुख प्रायोजक गोर्खा बु्रअरीका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा छापिने विज्ञापन हुन् वा सडक छेउका होर्डिङ बोर्डका विज्ञापन, अहिले लिगले नै प्राथमकिता पाएको छ। बु्रअरीले लिगबाट ब्राण्डिङलाई थप सशक्त बनाउन रङ्गशालाको प्याराफिटमा सानमिगल फ्यान जोन नै बनाएको छ (हे.तस्बिर)।
फूटबलको लोकप्रियतालाई हेरेर ब्याङ्किङ क्षेत्रले पनि लिगप्रति चासो देखाउन थालेका छन् जसमा नेबिल र इन्भेष्टमेन्ट अगाडि देखिएका छन्। नेबिल लामो समयदेखि थ्रीस्टारको प्रायोजक रहँदै आएको छ भने चालू लिगमा वेस्ट्रन युनियन पनि थपिएको छ। इन्भेष्टमेन्टले फ्रेन्ड्स क्लबसँग वार्षिक रु.८ लाखको सम्झ्ौता गरेको छ। त्यसैगरी लक्ष्मी हुण्डाई समूहले मनाङमर्स्याङ्दीसँग रु.१५ लाखको प्रायोजन सम्झ्ौता गरेको छ। जावलाखेलसँग सामसुङले वार्षिक रु.८ लाखको सम्झ्ौता गरेको छ। आरसीटीलाई भने चौधरी समूहको एलजीले प्रायोजन गरेको छ।
महिनामा पन्ध्र सय पाउँथे
लिगले नेपाली फूटबलको स्तर उकास्न खेलेको अहं भूमिकामा कसैको विमति छैन। तीन-तीन वर्ष लिग सञ्चालन नहुँदा यसको महत्व अझ् प्रस्ट हुने पूर्व राष्ट्रिय कप्तान हरि खड्का बताउँछन्। खेलाडीहरूलाई लिगले सधैँ फिट हुनुपर्ने दबाबमा पार्छ। खड्का भन्छन्, “खेलाडीहरूको अनुबन्ध र परिश्रम निर्धारण पनि खेलकै आधारमा हुने हो। राम्रो खेल्न र पैसा पाउन खेलाडीहरूले सधैं फिट हुनै पर्छ।”
अर्कोतर्फ लिगमा विदेशीहरूको बढ्दो उपस्थितिले नेपाली खेलाडीहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक भावना जागृत गराउँछ। चालु लिगमा खेलिरहेका विदेशी खेलाडीहरूको स्तर भने सन्तोषजनक नरहेको खड्काको मूल्याङ्कन छ। २०५२ सालमा एनआरटीबाट पहिलो पटक लिग खेल्दा रु.१५०० पाएका हरिले अहिले १० देखि २५ हजारमा खेलाडी अनुबन्ध हुनथालेको देख्दा खुशी छन्। तर, त्यसका लागि पनि खेलकौशल राम्रो हुनैपर्छ जसलाई उकास्न लिगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ। हरि भन्छन्, “प्रशिक्षकहरूलाई पनि लिगको प्रदर्शनका आधारमा खेलाडी छनोट गर्न सजिलो हुन्छ।” नेपाल पुलिस क्लबसँग आबद्ध खड्काले २०६३ सालको लिगमा उत्कृष्ट खेलाडी बन्दै टोयोटा यारिस कार हात पारेका थिए।
Scorecard, Nepal vs Hong Kong
Posted in Cricket, tagged ACC, Cricket, Hong Kong, Kuwait, Nepal, Paras on March 31, 2010| LeaveaComment »
Dates : 31st March – 9th April 2010
HONG KONG v NEPAL at Unity
NEPAL R B 4s 6s
Mahesh Chettri lbw A. Khan2500
Anil Mandal run out J. Iqbal 72 96 8 3
Shakti GauchanbN. Ahmed 65 9360
Paras KhadkabM. Ahmed 1 1100
Sharad Vesawkar c +bM. Ahmed41800
Mehboob AlambN. Ahmed 31 36 1 2
Dipendra Chaudhary not out 28 24 1 1
Basant Regmi c N. KhanbN. Ahmed 10 1100
Binod Das not out 1160 0
Rahul Vishvakarma DNB
Extras: w 6,b3, lb312
Total 236 for7off 50 overs
1-2 (0.5 overs), 2-120 (26.4 overs), 3-126 (29.2 overs), 4-132 (33.2 overs), 5-171 (41.6 overs), 6-186 (43.5 overs), 7-215 (47.4 overs)
Aizaz Khan50 25 1
Irfan Ahmed61 28 0
Asif Khan30 13 0
Nadeem Ahmed 10051 3
Jawaid Iqbal 10048 0
Moner Ahmed92 23 2
Ilyas Gul70 42 0
Roy Lamsam c wk M. Alam3700
Moner AhmedbM. Alam0100
Hussain ButtbB. Das 15 1920
Ilyas Gul c S. GauchanbM. Alam 27 2950
Nizakat KhanbP. Khadka511 1 0
Irfan Ahmed c M. AlambS. Gauchan 19 31 1 0
Waqas Barkat run out P. Khadka 19 4100
Jawaid Iqbal c P. KhadkabR. Vishvakarma 16 30 1 0
Nadeem Ahmed c S. RegmibB. Regmi0200
Aizaz Khan c D. ChaudharybB. Regmi41900
Asif Khan not out 1 1200
Extras: w 7, lb310
Total 118 all out off 33.3 overs
1-1 (0.3 overs), 2-13 (2.3 overs), 3-31 (5.5 overs), 4-54 (10.4 overs), 5-56 (11.4 overs), 6-91 (21.5 overs), 7-98 (23.6 overs), 8-99 (24.4 overs), 9-112 (30.1 overs), 10-118 (33.3 overs)
Mehboob Alam71 33 3
Binod Das50 27 1
Paras Khadka40 12 1
Basant Regmi 8 1 17 2
Shakti Gauchan51 13 1
Sanjam Regmi2150
Rahul Vishvakarma 2.308 1
NEPAL WON BY 118 RUNS
Man of the Match: Anil Mandal (Nepal)
Umpires: Irfan Adil (Kuwait), Younis Rasheed (Bahrain)
Match Referee: Kaleem ul Hassan (Kuwait)
Scorers: Waseem Abbas (Pakistan), Maznah Maulod (Singapore)
source: ACC website
Nepal demolish Hong Kong in first match
Posted in Cricket on March 31, 2010| LeaveaComment »
A good solid win for Nepal, they never gave Hong Kongachance and from the second over of the match were in front. Hong Kong today didn’t lok like defending champions and surely will need to come back stronger in the rest of the competition.
detail to follow…….
source: ACC webpage
HongKong all out 118/ 33.3 overs
Hongkong 108/8 (28 overs)
Hongkong 55/4 (11 overs)
NEPAL 238/7(50 overs)
Nepal 173/5 (42 overs)
Mahaboob 15*, Deependra 0*
Last batsman Shakti 69
Nepal 126/3 (29 overs)
Shakti 42* Sharad 0*
Last batsman, Paras 1
After 23 overs
After 21 overs
Anil 56*, Shakti 37*
Nepal 79/1 (18 over)
ACC Trophy Elite 2010
Posted in Cricket on March 30, 2010| LeaveaComment »
Hong Kong UAE
AFC President’s Cup: Myanmar to host two groups
Posted in Football, tagged Football, League, Mahendra Police Club, Myanmar, Nepal, NRT, President Cup on March 30, 2010| LeaveaComment »
Kuala Lumpur: Myanmar will host two groups of the AFC President’s Cup 2010 while Bangladesh will host the third as 11 teams will vie for the top honours in the continent’s third tier club competition.
Bangladesh’s capital Dhaka will host the Group A matches from May 12 to 16 at the Bangabandhu National Stadium while both Group B and C will be played in Yangon, Myanmar.
Group B games will be played at Yangon’s Youth Training Centre and Aung San Stadium from May 10 to 14 while the Youth Training Centre will host the three-team Group C matches from May9to 13.
AFC has also reminded the participating clubs to submit the require documents for players and officials registration before the deadline of April 6, 2010.
The group champions and the best runners-up will qualify for the Finals which is scheduled to take place in September.
Group A (Dhaka, Bangladesh; May 12-16, 2010)
Yoedy (Chinese Taipei)
Nepal League Champions (TBC)
Group B (Yangon, Myanmar; May 10-14, 2010)
Khan Research Laboratories (Pakistan)
Renown Sports Club (Sri Lanka)
Group C (Yangon, Myanmar; May 9-13, 2010)
source: AFC website
उत्साहित नेपाल कुवेत मिसनमा
Posted in Cricket, tagged ACC, Cricket, Kuwait, Nepal, Paras Khadka, squad on March 30, 2010| LeaveaComment »
काठमाडौ, चैत्र १४ – आईसीसीस्तरको प्रतियोगितामा पाएको सफलतापछि थप आत्मविश्वासी नेपाली क्रिकेट टिम अर्को इतिहास रच्ने मनसायले कुवेत प्रस्थान गर्दै छ । कुवेतमा मार्च ३१ देखि अपि्रल ९ सम्म हुने एसीसी ट्रफी एलाइट २०१० क्रिकेटमा सहभागी हुने नेपाली टिम त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा तयारीमा व्यस्त छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ -क्यान) ले कुवेत जानका लागि काठमाडौंमा सम्पन्न आईसीसी वल्र्ड लिग क्रिकेट डिभिजन-५ को विजयी टिमलाई दोहोर्‍याएको छ । नेपालले त्यस लिगमा सफलता पाउँदै आफूलाई डिभिजन-४ मा उकालेको थियो र सन् २०१५ विश्वकप क्रिकेटमा प्रवेशको सम्भावना कायम राखेको छ ।
अगस्टमा इटालीमा हुने डिभिजन-४ मा नेपालले सहभागिता जनाउनेछ । ‘एसीसी ट्रफीलाई हामीले डिभिजन-४ को तयारीका रूपमा लिएका छौं,’ नेपाली प्रशिक्षक रोय लुक डायसले भने । उनको प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली टिमले हालसम्म एसीसी प्रतियोगितामा भने सफलता हात पारेको छैन ।
यसपल्ट एसीसी ट्रफीको फाइनल खेल्ने दुई टिमले एसिया कपमा सहभागिताको अवसर पाउने छैनन् । यसअघि फाइनल पुग्ने दुई टिमले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश सम्मिलित प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँथे । समय अभावले टेस्ट मान्यताप्राप्त राष्ट्रबीच मात्र एसिया कप हुनेछ ।
पारस खडकाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टिमले समूह चरणमा हङकङ, सिंगापुर, कुवेत र ओमानको सामना गर्नेछ । हङकङ डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो । दुई वर्षअघि मलेसियामा भएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले हङकङलाई ४४ रनले पराजित गरेको थियो । सेमिफाइनलमा यूएईसँग ६ विकेटले हारेपछि नेपालको फाइनल यात्रा टुङगएको थियो ।
वन डे क्रिकेटमा नेपालले हालसम्म यूएईलाई पराजित गरेको छैन । यसपटक पनि नेपालले यूएईलाई समूह चरणमा भेटने छैन । समूह ‘बी’ मा यूएईसँगै अफगानिस्तान, मलेसिया, बहराइन र भुटान छन् । भुटान एसीसी च्यालेन्ज कप विजेताका रूपमा पहिलोपल्ट यस श्रेणीमा प्रवेश गरेको हो ।
‘डिभिजन-५ को सफलता अब इतिहास बनिसक्यो, नयाँ सफलताका लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ,’ डायसले भने, ‘घरेलु भूमिमा पाएको सफलताले खेलाडीको आत्मविश्वास बलियो भएको छ ।’ उनले एसीसी ट्रफी अहिलेसम्म नजितेकाले जित्नुले विशेष महत्त्व राख्ने बताए । उनले कुवेतमा हुने प्रतियोगिता डिभिजन-४ को तयारी भएकामा विशेष जोड दिए ।
‘प्रतियोगिताका सबै टिम राम्रा छन्,’ उनले मध्यपूर्वका टिमबारे धेरै जानकारी नहुने बताए । डायसले समूह चरणमा हङकङ र सिंगापुरले कडा चुनौती प्रस्तुत गर्न सक्ने विचार राखे । नेपालमा सम्पन्न आईसीसीस्तरको प्रतियोगितामा नेपालले सिंगापुरलाई पराजित गरेको थियो । ‘कुवेतमा खराब प्रदर्शनको क्रमलाई रोक्नुपर्छ,’ डायसले भने, ‘यसपटक हाम्रो ब्याटिङ पनि राम्रो भइरहेको छ ।’
नेपालले कुवेतमा भएको एसीसी ट्वान्टी-ट्वान्टी र एसीसी यू-१९ क्रिकेटमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकेको छैन । कुवेतको पिच नेपालको भन्दा फरक छ । त्यसैले नेपाली टिमले आफूलाई त्यसअनुरूप ढाल्न ‘टर्फ’ र ‘म्याट’ पिच दुवैमा अभ्यास गरिरहेको छ । समय अभावले
यसपल्ट नेपाली टिम अभ्यास खेल नखेली सीधै कुवेत प्रस्थान गर्दै छ । टिममा सहभागी १४ मध्ये ११ खेलाडीसँग अघिल्लो संस्करणको पनि अनुभव छ ।
राहुल विक, विनोद भण्डारी र अनिल मण्डलले मात्र पहिलोपल्ट एसीसी एलाइट कपमा भाग लिन लागेका हुन् । एसीसी ट्रफीको यसअघिको सात संस्करणमध्ये अघिल्ला दुईमा टेस्ट मान्यता पाउनुअघि बंगलादेश च्याम्पियन बनेको थियो । बंगलादेशपछि यूएईले एसीसी ट्रफीमा प्रभुत्व जमायो । सन् २००८ को फाइनलमा हङकङले यूएईलाई हराएर उसको प्रभुत्व रोकेको थियो ।
सिंगापुरमा सन् २००२ मा भएको प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपालले यूएईको सामना गरेको थियो । त्यसमा नेपाल ६ विकेटले पराजित भएको थियो । त्यसबाहेक नेपाल अहिलेसम्म तीनपल्ट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । सन् २००६ मा भएको पछिल्लो संस्करणमा नेपाललाई यूएईले नौ विकेटले हराएको थियो ।
ज्ञानेन्द्रले कुवेतको भिसा पाएनन्
Posted in Cricket, tagged ACC, Cricket, Gyanendra Malla, Kuwait, Nepal, Visa on March 30, 2010| LeaveaComment »
काठमाडौं, चैत १७ (नागरिक)- उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लबिना नै नेपाली टोली एसिसी ट्रफी इलाइट खेल्न सोमबार कुवेत लागेको छ। १६ सदस्यीय नेपाली टोली बिहान साढे ९ बजे गल्फ एयरबाट कुवेततर्फ लाग्दा प्रमुख ब्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र भिसा अस्वीकृत गरिएका कारण घरैमा बस्न बाध्य भए।
नेपाली टोलीका वैकल्पिक सहित सबै खेलाडीको भिसा आए पनि ज्ञानेन्द्रको भिसा दुई पटक अस्वीकृत भएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले जनाएको छ। शनिबार तेस्रो पटक उनको भिसाका लागि आवेदन दिइएको छ। मंगलबारसम्म भिसा आएमा ज्ञानेन्द्रलाई नै कुवेत पठाइने नत्र भने वैकल्पिक खेलाडीलाई पठाइने क्यान अध्यक्ष विनयराज पाण्डे बताउँछन्।
बैकल्पिकमा सुवास खकुरेल, नरेश बुढाऐर र प्रदीप ऐरी छन्। १० राष्ट्रसम्मिलित प्रतियोगिता बुधबार सुरु हुँदैछ। एसियाली क्रिकेट परिषद् (एसिसी) ले आयोजना गर्ने यो सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो। ज्ञानेन्द्रको भिसा नआएपछि नेपालले आइतबार कडा आपत्ति जनाउँदै एसिसीलाई पत्र पठाएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
‘गल्फ राष्ट्रमा हाम्रा खेलाडीमाथि बारम्बार भएको यस्तो घटनाविरुद्ध आगामी मे महिनामा हुने एसिसी विकास बैठकमा हामी यसलाई मुद्दा बनाउने छौं,’ एसिसीको विकास बैठक सदस्य पनि रहेका पाण्डेले भने, ‘यो प्रतियोगिता हाम्रो पेप्सी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन-४ को तयारीको रूपमा पनि रहेको छ, त्यस हिसाबले यो हाम्रा लागि प्रमुख प्रतियोगिता हो, भिसाका कारण ज्ञानेन्द्र खेल्न पाएन भने त्यो हाम्रा लागि ठूलो घाटा हुनेछ।’
नेपालले कुवेत गएर खेल्न लागेको यो तेस्रो प्रतियोगिता हो। यसअघि २००७ मा पहिलो एसिसी ट्वान्टी-२० इलाइट कप र गत वर्ष एसिसी यु-१९ इलाइट कप गरी नेपालले कुवेतमा दुई प्रतियोगिता खेलेको थियो। कुवेतको दुबै प्रतियोगिता खेल्ने नेपाली टोलीमा ज्ञानेन्द्र एकमात्र खेलाडी हुन्। राष्ट्रिय टोलीबाट पहिलो पटक खेल्ने क्रममा ज्ञानेन्द्रले २००६ को एसिसी ट्रफीमा तीन अर्द्धसतक बनाएका थिए।
भिसा नपाएर गल्फ राष्ट्रमा खेल्न नपाउने महबुव आलम पहिलो खेलाडी हुन्। २००६ मा युएईविरुद्ध शारजहाँमा भएको एसिसी प्रिमियर लिग तीनदिवसीय प्रतियोगितामा खेल्न जाने क्रममा महबुवको भिसा अस्वीकार गरिएको थियो। गत नोभेम्बरमा युएईमा सम्पन्न एसिसी ट्वान्टी-२० मा महबुव र सहायक प्रशिक्षक मन्जुर आलम खानको भिसा नेपाली टोली युएई उड्ने अन्तिम समयमा आएको थियो।